DA- BW19002 fanaka vy fandrahoana vy 2020 amidy mafana
Ny lapoaly fanendasa nentim-paharazana dia afaka mahandro tsy manara-penitra, ka matetika miteraka hena izay tsy azo hanina loatra. Vaovao sy nohatsaraina! Ny savily mifanelanelana dia misaraka mba hanafoanana haingana sy fanadiovana mora kokoa. Alatsaho ny tsy fitovian'ny vy amin'ny vatam-bolanao vaovao izay manaparitaka ny hafanana ho an'ny hena masaka masaka tsara. Mahafinaritra izy io ary
DA-BW24002 fitaovana fandefasana vy 2020 fivarotana mafana vita any Sina
DA-BW32001 fandrahoana vy fandrahoana vy DISA
DA-BW18001 vy vy 2020 amidy